समीक्षा कि प्रतिवेदन ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय समीक्षा कि प्रतिवेदन ?
on: March 07, 2019 सम्पादकीय
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको आकार करीब १० प्रतिशत कम हुने बताइएको छ । वार्षिक बजेटको शुरूको आकारमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि यति कम हुने प्रक्षेपण भनेको सामान्य नै हो । तर, बजेट किन खर्च भएन र त्यसमा सुधार गर्न कस्तो नीति लिइन्छ भन्ने नीति सार्वजनिक नगरिएकाले यो बजेट खर्चको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनजस्तो मात्रै भएको छ ।
विकासका लागि आयात वृद्धि हुन्छ । त्यसले व्यापारघाटा बढाउँछ । व्यापारघाटा बढेपछि त्यसका असर चालू खातामा पर्छ । फलतः शोधनान्तर घाटा हुन पुग्छ । तर, यो र यस्ता अन्य समस्याको समाधानको नीति नलिइएकाले यो समीक्षा बजेट खर्चको प्रतिवेदनमात्रै बन्न पुगेको छ ।
आवको ६ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्यको १७ दशमलव ७ प्रतिशत हुनु चिन्ताको विषय हो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले पू“जीगत खर्च राम्ररी हुन सकेन भन्ने तर्क विगतमा गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यस्तै केही वर्ष अघिसम्म बजेट ढिला पारित भएकाले पूँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने गरिन्थ्यो । त्यही भएर नयाँ संविधानले बजेट पारित हुने मिति नै तोक्यो र त्यसै अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि बजेट पारित हुन थालेको छ । तर पनि पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति उस्तै रहिआएको छ । त्यस्तै रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । शक्तिशाली र स्थिर सरकार हुँदा पनि यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुुनुले नेपालको खर्च प्रणालीमै समस्या छ भन्ने स्पष्ट बताएको छ । यो प्रणालीमा परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको पनि छ । तर, समीक्षामा यसबारे कुनै चर्चा नहुनुले यो प्रगति प्रतिवेदन जस्तो मात्रै देखिएको हो ।
कुल बजेटको आकार करीब १० प्रतिशत घटाइए पनि बा“की अवधिमा त्यो घटाइएको लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन सक्ने आधार भने देखिन्न । विगतकै जस्तो हतारोमा बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ यो वर्ष पनि दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै टड्कारो देखिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न अघिल्लो सरकारको पालामा जेठ १५ पछि भएको खर्चको भुक्तानी नदिने नीति घोषणा भएको थियो जुन कार्यान्वयन भने भएन । अहिले पू“जीगत खर्चको समस्या दोहोरिने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको समाधानका लागि नीतिगत घोषणा नगरिनु रहस्यमय देखिन्छ । समीक्षाले बजेट घटाउने कामबाहेक केही पनि गरेको देखि“दैन । तैपनि यो लक्ष्य प्राप्त भयो भने बजेटलाई उत्कृष्ट नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनुलाई बढी भएको बोसो घटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो भनेको हामीसँग पहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनावश्यक रूपमा धेरै थियो, अहिले त्यसलाई रणनीतिक तरीकाले नै घटाइएको छ भन्ने हो । अनावश्यक रूपमा बढी सञ्चिति हुनु भनेको पैसा थुपार्नु नै हो । तर, कुनै किसिमले अर्थतन्त्रमा बाह्य झट्का (शक) लाग्यो भने हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्र थोरै विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण जोखिममा पर्न सक्छ । बढी सञ्चिति भनेको यस्तो जोखिमबाट जोगिने ‘बफर’ अर्थात् सुरक्षा हो । यो कम भयो भने अर्थतन्त्रले झट्का झेल्न सक्दैन । अर्थमन्त्रीको यो भनाइ अनुसार हाल घटेको सञ्चिति त्यस्ता झट्का झेल्न पर्याप्त छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
औद्योगिक उत्पादन लगायत सामानको आयात बढ्नु उपयुक्त देखिए पनि नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्नु चिन्ताको विषय हो । तर, यो पक्ष भने यो समीक्षामा र अर्थमन्त्रीले समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा दिएको मन्तव्यमा छुटेको छ । कृषि उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउन सरकार असफल रहेको देखिन्छ ।
विकास बजेट निकासा : १ सातामा २९ अर्ब ६८ करोड